Lixda Xul ee tartanka: Wales iyo England ayaa xukuma XV -da ugu fiican | 1xbet
Qayb weyn oo ka mid ah waxa Saracens si fiican u qabato isla markaana la mid ah Wales, Williams wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo awoodiisa inuu ka ciyaaro garabka ayaa fure u ahaa, sida lagu arkay Ireland. Ciyaartii Ingriiska wax walba ayuu jawaab u ahaa, halka Elliot Daly laga yaabo inuu yahay orodyahan ka khatar badan meelaha bannaan, Williams ma gelin cag. Robert Kitson Akhri wax dheeraad ah 14 Josh Adams, Wales
Difaac ahaan runtii waa cajiib Isagu waa ammaan, xoog iyo nabar; waa la siiyay fursadiisii ​​waana qaatay. Wuxuu si gaar ah ula shaqeeyaa Jonathan Davies, si wanaagsan ayuu ula xiriiray, Wales -na wax badan kama aysan dhalin garabkiisa.Wuxuu isku dayay inuu ka hortago England, sidoo kale-dhamaantiis waa tartan aad u wanaagsan. 13 Henry Slade, England
Davies aad buu ugu adkeeyay Wales laakiin, isagoo ku eegaya banaanka dhexe koofiyada tababarahayga on, Waxaan jeclaa daawashada ciyaarta Slade. Marka la siiyo xoogaa xorriyad ah, marka uu kubbadda ka helo meelo ballaadhan, wuxuu muujiyey karti -xirfadeedkiisa. Wuxuu awood u leeyahay in uu ka dhex muuqdo dulduleelada, go’aammo wanaagsan sameeyo waana ikhtiyaar laad-cag bidix ah. Haddii aan la jiri lahaa Dhammaan Madow, isagu waa nooca ciyaartoy ee aan isha ku hayn lahaa. Facebook Twitter Pinterest Henry Slade ayaa muujiyey kartidiisa. Sawir: Andrew Fosker/Ilbidhiqsiyo Bidix/Rex/Shutterstock12 Hadleigh Parkes, Wales
Si macquul ah ayuu mararka qaarkood u aamusan yahay laakiin waa ciyaaryahan sidaas u adag wuxuuna ahaa mid aad u fiican kulankii Ireland.Daboolkiisa daboolida ee Jacob Stockdale ayaa ahaa meesha ugu sarreysa ciyaartaas wuxuuna u joogay inuu dhaliyo isku dayga Wales. Isagu waa meel fiican oo duulimaad kasta ‑ badhkii u ciyaarayo Wales, waa wada -xariir aad u wanaagsan oo si xoog leh u difaac ahaan u adag.11 Jonny May, England
Jonny wuu ka sii xoog badan yahay oo wuu ku sii xoogaysanayaa maaliyadda England. Wuxuu yaqaanaa dariiqa loo maro tijaabada 14-kii kulan ee ugu dambeeyay 15 laakiin waxa aad ii soo jiitay waa xirfadiisa cirka, ha ahaato in la laaday ama la eryay laadadka Ben Youngs. Wuxuu amar ku bixiyaa hawada, wuxuu ku guuleystaa booska u dhexeeya isaga iyo qaataha waxaana dushiisa saaran hubka weerarka ee England. Andy Bull Read moreDadku waxay ku mashquulayaan hoggaamintiisa oo wuxuu leeyahay waxyaabo uu ka shaqeeyo sida dhererkiisa wax ka qabashada laakiin weli waa cayaaryahan heer caalami ah iyo No 10-ka ugu wanaagsan ee waqooyiga waqooyi xilligan. Waxa kaliya ee aan ka welwelsanaa waa sida ay England ugu tiirsan tahay isaga. 9 Ben Youngs, England
Mid adag sababtoo ah uma maleynayo in mid ka mid ah No 9 -kii uu soo maray tartamo cajiib ah laakiin, marka la eego joogteynta , Youngs ayaa qaata. Tito Tebaldi wuxuu u shaqeeyay Talyaaniga, Antoine Dupont wuxuu u muuqday mid si fiican uga dhex muuqday, laakiin Youngs ayaa ahaa kan ugu wanaagsanaa tartanka oo laadkiisa ayaa qeyb muhiim ah ka ahaa sababta England u garaacday Ireland. Facebook Twitter Pinterest Rob Evans ayaa u dabaaldegaya ka dib markii Wales ay ku guuleysatay slam weyn.Sawir: Chris Fairweather/Huw Evans/Rex/Shutterstock1 Rob Evans, Wales
Mid ka mid ah tiro ka mid ah dadka reer Wales ee ku jira baakadka laakiin taasi runtii waa halka ay ku guuleysteen kulamadooda. Safka hore ma aha aagga aan khibradda u leeyahay laakiin shanta hore ee Wales ayaa aad u qurux badan. Dhanka Ireland cadaadiska ayaa dhab ahaantii ahaa mid xagga hore ah laakiin wixii aan ka arkayay scrum -ka reer Wales ayaa ahaa mid aad u weyn. Waxaan seegi doonaa Lix Qaran laakiin hadda waxay ku dhan tahay Japan, ayuu yidhi Warren Gatland Read more2 Ken Owens, Wales
Ken wuxuu qabtay tartan cajiib ah – safka ayaa laga yaabaa inuu xoogaa yara murugoodo laakiin wuxuu dabeecad badan u keenayaa kooxdaan Wales wuxuuna sidoo kale ka dhex muuqdaa garoonka.Kooxda u halgamey sifiican laakiin ku guuleeystay slam -ka weyn, wax badan ayey ka sheegaysaa hogaaminta Kenna qeyb weyn ayuu ka yahay. berrinka, ayaa qaangaadha oo waayo -aragnimada badan ee uu ka helo heerka Imtixaanka si fiican ayuu u noqon doonaa. Waxaan ku tababaraa Harlequins, dabcan, waxayna i cajab gelisaa sida uu inta badan uga hadlayo ciyaarta wajiga iyo ka ciyaarista dhabarka. Wali ma jecli sida uu u qayliyo mar kasta oo ay jirto wax-qabad nus-hufan laakiin waxaan u malaynayaa inaad hadda uun qabsatay!
Brodie Retallick ayaa inta badan lagu tilmaamaa qufulka ugu saamaynta badan adduunka laakiin waxaan eegaa hoggaaminta Jones iyo joogitaankiisa intii lagu jiray Lixda Dal oo halkaas ayaan dhigi lahaa.Isagu waa magaca koowaad ee ku jira xaashida kooxda oo aan su’aal la weydiin, si aan kor ugu qaadno waxaan aragnay sawirka isaga oo jaakaddiisa siinaya mascot -ka, oo gariiraya, inta lagu jiro heesaha. Taasi waa mid isaga uun tusaysa. Facebook Twitter Pinterest Félix Lambey (dhexda) ayaa u ahayd barxad aad u wanaagsan kooxda faransiiska. Sawir: Giuseppe Fama/INPHO/Rex/Shutterstock5 Félix Lambey, France
Wuxuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa ee is-daba joogga u ahaa koox is baddashay oo kor iyo hoos u korodhay sida yo-yo, ku dhawaad daqiiqad ilaa daqiiqad. Waa fanaan weyn, si adag buu u qaaday, wuxuu sameeyay taakalkiisa wuxuuna u qalmaa in xoogaa la aqoonsado waxqabadkiisa.6 Tom Curry, England
Ciyaaryahanka ugu fiican England ee tartanka masaafo aad u fog. Wuxuu ka gudbaa kubbada wuxuuna awood u leeyahay inuu isku xiro ciyaarta sidoo kale.Wuxuu u eg yahay inuusan luminin garaacis taasoo kor u qaadaysa heerka rugby -ga kooxda ilaa heerka Imtixaanka. Waa weyn yahay, xoog badan yahay wuxuuna leeyahay farsamo aad u fiican. Gerard Meagher Akhri wax dheeraad ah Saameyntiisa wuxuu ku sameeyaa kanaalada ballaaran laakiin wuxuu sidoo kale cadaadis ku saari karaa kubbadda burburka sidoo kale. Kaliya waa akhrintiisa ciyaarta iyo khadadka taageerayaashiisa – awood uu ku garan karo halka ay kubaddu ku socoto. Waxay u badan tahay inuu isku xiro ciyaarta waxoogaa ka badan weerarka marka loo eego Curry sidoo kale wuxuu aad ugu xeel dheer yahay inuu cadaadis saaro kubbadda burburinta.Waxaan doortay saddex toddobaad oo dhaqameed laakiin dhammaantood waxay kooxdan u keenaan wax xoogaa ka duwan.